Online မှာခေတ်စားနေတဲ့ ဂျင်းဖက်ရှင်အသစ် Sold Out ဖြစ်သွား – FemaleWear.net
အခုရက်ပိုင်း လူငယ်အများကြားမှာ ရေပန်းစားခေတ်စားနေတဲ့ Jean fashion အသစ်ကြောင့် အံ့အားသင့်နေကြပါတယ်။ တချို့ကလည်း တကယ်ရော ရှိရဲ့လား? ဟာသလုပ်ထားတာများလား? ဆိုပြီး သို့လော သို့လောနဲ့ ဝေခွဲမရဖြစ်နေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီ fashion ဒီဇိုင်းကို ထုတ်လိုက်တဲ့ brand တစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ EXTREME CUT OUT လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။
ဒီ Jean ဒီဇိုင်းကိုတော့ LA အခြေစိုက် brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Carmar ကထုတ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းကတော့ $168 (£123) နဲ့ရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာတော့ လူစိတ်ဝင်စားမှုများသောကြောင့် website မှာ sold out ဖြစ်နေပြီး ရောင်းမလောက်ဖြစ်နေဆဲပါ။
Tags: Brand, Jeans
အမျိုးသမီးအတွင်းခံတွေကို Plus-size အတွက်ပါ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Rihanna
၂၀၁၈ ရဲ့ Instagram Follower အများဆုံး Celebrity များ